Imidlalo engcono kakhulu ongayidlala ku-Zoom nomndeni nabangane 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kulesi sikhathi sokuhlukaniswa kwezenhlalo ngenxa ye- Covid-19 sonke sisebenzisa ubuchwepheshe obenziwe batholakalela ukubamba izinkomfa zevidiyo nemihlangano eku-inthanethi, njenge GxilaKodwa-ke, amakholi wevidiyo angaba nethuba lokuzijabulisa, ahlele izikhathi zomdlalo we-inthanethi nabangani nomndeni.
Ngakho-ke lapha sikunikeza ukukhethwa kwemidlalo elula ngokwedlulele ongayidlala. Gxila (noma ku-Meet noma olunye uhlelo lokusebenza lokushaya ividiyo), ngaphandle kokulanda isoftware noma izinhlelo zokusebenza, kepha ngokumane uxhumane nabangane nomndeni, usebenzisa ezinye izinto ezisebenzisekayo zamahhala ezenziwa yipulatifomu nokushiya indawo yobuciko bakho nemicabango yakho, ukukunikeza amahora ukuphumula nokuhleka. Ukuphendula ngaphandle kokugqagqana nokwenza yonke into ibe mnandi kakhulu, iseluleko ukukhetha ezimbalwa amasiginali wemisindo enza ngathi botones.
FUNDA NONKE: Los mejores juegos multjugador
Okwamanje lapho ungaba khona isethulo kusuka kukhompyutha yakho, ungabamba nefayela le- ukuhlolwa kalula kakhulu, ngenzuzo yokukwazi ukufinyelela kubantu abaningi ngasikhathi sinye. Kungenzeka ukuthi ukhuthazwe yimincintiswano yethelevishini efana "Ngubani ofuna ukuba usozigidi" O "Ifa" futhi kubandakanya abantu abaningi emaqenjini ahlukene ukuze bazijabulise ndawonye. Ngakho-ke, ungesabi ukucabanga okukhulu futhi ube nobuciko!
Kungenzeka uqhubeke nokwakha uhlu lwemibuzo ngephepha nangamapeni, kepha uma ukhetha okuthile kwidijithali, Kahoot angakusiza. Kahoot Ivumela, empeleni, ukudala isethulo semibuzo enezinqumo eziningi, wonke umuntu abelana ngaso ngesiphequluli sakhe sewebhu futhi aphathe bonke abaphathi uma kukhulunywa ngokuvota nokubala izikolo. Uhlelo lwamahhala lukuvumela ukuthi wabelane ngemibuzo Kahoot nabantu abangafika kwabangu-10 ngasikhathi sinye, ngezinketho ezenziwe zaba ngezakho zezikhathi namaphoyinti.
FUNDA NONKE: Imidlalo engcono kakhulu ye-trivia enemibuzo (i-Android ne-iPhone)
Lo mdlalo ubona amaqembu amabili encintisana kugridi eyabiwe eku-inthanethi egcwele amagama futhi inhloso yakho ukusula amagama eqembu lakho ngokushesha okukhulu. Iqembu ngalinye liqoka "induna" onomsebenzi wokunikeza izinkomba kubalingani bakhe ukuqagela amagama amaningi ngangokunokwenzeka: isibonelo igama "usuku" kungaba inkomba yegama "isikhathi" ukuthi ngezwi "ukukhanya". Ngokusobala, lapho ubhala amagama amaningi ngemikhondo embalwa, ibhodi iyasula ngokushesha futhi ayanda amathuba okuphumelela.
Lona ngumdlalo omuhle futhi ovumela abantu ukuthi basukume bazulazule futhi basebenze neqembu lapho kunabantu abaningi abazungeze i-laptop noma i-webcam ngayinye. Kungenzeka ukwenza ukuzingelwa kwengcebo kube isikhathi eside futhi kube nzima kakhulu noma kube kufushane futhi kube lula ngenhloso yokuqoqa izinto ezithile noma izinto ezihlangabezana nenqubo ethile, kuyo yonke indlu. Ukugcina ukuncintisana phakathi kwabadlali abahlukene kuphezulu, kungenzeka ukwengeza noma ukususa amaphuzu ngokuya ngejubane nobuciko babahlanganyeli ekukhetheni izinto. Ukugcinwa Kwezindlu Okuhle unohlu oluqinile lwemibono esemqoka ukuze uqalise.
Ngaphesheya kwebhodi loku Gxila, etholakala esigabeni Yabelana, ungadlala inguqulo ebonakalayo ye- IzichazamazwiNgokulandelayo, umhlanganyeli ngamunye womdlalo uzokwabelana ngebhodi lakhe nabanye futhi uzoqala ukudweba kuwo. Ungakhetha futhi wenze ngezifiso imibala ehlukahlukene, osayizi bokuxubha nokuningi ukwenza umdwebo wakho uhluke futhi ubhekane namaqiniso.
Umbambiqhaza wokuqala ukuqagela ukuthi badwebani bazolithola iphuzu!
Cishe wonke umuntu une- I-monopoly: njengoba sibonile phambilini ngefayela le- chessKulokhu, futhi, konke okumele ukwenze ukuyilungisa, wakhe isikhala sokuthi ikhompyutha ibe isipiliyoni nomdlalo owabiwe. Uzodinga amabhange amabili noma ngaphezulu, elilodwa leqembu ngalinye. Gxila, ozophinda futhi aqinisekise ukuthi abekho abantu abazama ukukopela nokuthi lokhu kuthengiselana okukude phakathi kwabadlali kuyasebenza.
Umdlalo, ngokusobala, kuzofanele wenziwe emabhodini eqembu ngalinye ekuhambeni kwama-pawn nasekwakhiweni kwezindlu namahhotela. Kuyiqiniso ukuthi ezinye izincwadi, njenge izehlakalo ezingalindelekile mi Ithuba Bazophindwa kabili ukuthi ezinye izingxenye zomdlalo ngeke zisebenze nhlobo, kepha okubalulekile ukuzijabulisa ngokubambisana futhi sichithe amaholide nabathandekayo ngisho nase "kude".
FUNDA NONKE: Imidlalo yebhodi neyendawo eku-inthanethi kuyo: ubungozi, ubukhosi kanye nabanye
Lo mdlalo udinga ukuthi bonke abadlali babe nawo Wikipedia vula kunoma iyiphi idivayisi, kungaba ilaptop, ithebhulethi noma ifoni. Bonke abadlali kumele babe nekhasi lokuqala nelokuphela elifanayo - umuntu osuka komunye aye komunye ngesikhathi esifushane nguyena onqobayo. Umthetho oyisihluthulelo ukuthi ungahamba kuphela kwi-encyclopedia ngokuchofoza noma ngokuthepha izixhumanisi kusuka Wikipedia, ngakho-ke abadlali kudingeka bacabange ngokukhaliphile ukuthi iziphi izixhumanisi abanquma ukuzilandela.
Kulomdlalo, umcabango uyikho konke ... okudingekayo ukuze ujabule! Umhlanganyeli ngamunye, naye, kufanele azame ukwenza abanye baqagele into, umlingiswa, isilwane kalula mimandoli. Umkhawulo kuphela umcabango wakho! Ungacabanga futhi ngokuguqula lo mdlalo ube yinguqulo. movie, ngaleyo ndlela ulingisa izihloko zamafilimu e-cinema, aze ahlanganiswe namagama ambalwa. Kulokhu, ngaphambi kokuqala ukulingisa ifilimu, kubalulekile ukukhombisa inani lamagama akha isihloko bese… uqalisa inselelo!
Omunye umdlalo omnandi wokuphakamisa Gxila es Qagela ingoma, uhlobo Sarabanda Ku-inthanethi okuzodala ubumnandi nokuncintisana. Okungcono lapha ukusizakala ngomsebenzi wokwabelana ngomculo ongenziwa usebenze ngokuchofoza isithonjana Yabelana bese uya esigabeni Kuthuthukile nokukhetha i-athikili Yabelana ngomsindo wekhompyutha kuphela. Ngaleso sikhathi, umsindo ovela kukhompyutha wanoma ngubani onikezwe umsebenzi wokukhetha ingoma ozoyiqagela uzokwabiwa nawo wonke umuntu. Kuzokwanela, ngakho-ke, ukuqala ingoma bese ... ulinde owokuqala ukuthi akwazi ukunikeza impendulo eyiyo enseleleni enkulu yolwazi nokusebenza kabusha komculo.
Uma ukhetha okuthile okuthule kancane, i- chess zingumdlalo olula ukuphonswa Gxila. Impela, ungadlala i-chess online noma nganoma yiluphi uhlobo lomlayezo, kepha ukuchitha isikhathi ukhuluma nomuntu okude kude ne-chessboard kuzokukwenza uzizwe usondelene. Kumele ukhumbule ukuhambisa izingcezu kuwo womabili amabhodi ukuze uhlale ulawulwa ngumdlalo. Futhi ngokuthanda kakhulu, kungenzeka ukudlala izinsuku ezimbalwa: kwanele ukushiya ukumiswa kwebhodi nazo zonke izingcezu ezikhona. Lokhu futhi kukunikeza isikhathi sokuhlela isu lokuwina!
FUNDA NONKE: Chess futhi zintokazi mahhala ku-Android, i-iPhone naku-inthanethi
Ukunyuka - Ukunyuka
Wazalelwa njengokuzivocavoca umzimba ukusebenzisana abasebenzi abasebenza kude, Ukuhamba manje isiyatholakala kunoma ngubani ofuna ukuyizama mahhala.
Umbalisi uhola lonke iqembu, ahlukaniswe ngamaqembu ancintisanayo, abelana ngamaslayidi anikeza ithuba khetha i-adventure yakho- Uzodinga ukwenza izinqumo zeqembu ngokusebenzisa ipulatifomu yemiyalezo osheshayo oyikhethile ukuqinisekisa ukuthi iqembu lakho liyasinda ebusuku futhi lingalimali.
Dlala Ama-charades Engqungqutheleni yevidiyo, udinga i-headroom ethile ukuze isebenze nokukhanya okuningi ukuze ividiyo ingabi namandla kakhulu. Inhloso yalo mdlalo ukucela umlingisi aqhamuke nombono bese ewumisa ukuze iqembu lakhe lonke liqagele. Labo ababamba iqhaza kukholi yevidiyo bangabuka, balandele isikhathi, futhi baqiniseke ukuthi akukho ukukopela okwenzekayo. Uma bonke ababambiqhaza benesethi yamakhadi Ama-charades ekhaya kungcono kakhulu.
FUNDA NONKE: Dlala i-Bingo, i-scoreboard nenombolo yokukhipha
Kwezinye izindatshana sibonile futhi:
Imidlalo engu-10 emibili engayidlala kwi-PC efanayo noma nge-Intanethi (HTML5)
Imidlalo engu-20 yamahhala yokudlala imidlalo eku-inthanethi futhi udlale ngokumelene nabangane